Ezi zixhobo zintlanu ziya kukuhlangula kukudinwa kokuyila | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Uxinzelelo kunye nokudinwa okuyilayo kuqhelekile namhlanje. Enye yeengxaki ezinkulu zeGen X kunye noGen millennials. Kungenxa yoko le nto ibangela ifuthe elibi ebantwini. Kwinqanaba lomntu kunye nelobungcali. Amaqela omsebenzi ayahlupheka, ubuchule buyaphela. Zininzi 'Ubusazi…' malunga noxinzelelo kunye nokudinwa kokuyila.
Kodwa, izisombululo ezimbalwa. Akukho zininzi ezinye iindlela njengokuya kwisayikholojisti okanye kunyango lokothuka. Zombini, ubuncinci, zibiza. Kwaye ayinguye wonke umntu onokufumana iseshoni yeveki kuyo. Kungenxa yoko le nto siza kubonisa usetyenziso lweeselfowuni ezi-5 eziza kunceda ekupheliseni ukudinwa okuyilayo okudingayo.
Kwaye ngelixa i-smartphone yakho inokuba noxanduva ngokuyinxenye ukusuka kwi-cortisol eyandileyo, Ii -apps ziyafumaneka ukukunceda ulawule amaza obuchopho bakho kwaye uyigcine intsha njengemifuno. Nokuba uphi na ubomi. Gcina ubuchule bakho kwinqanaba ngokuthatha amanyathelo okulawula uxinzelelo kunye nokudinwa ngezi zinto zintlanu zokusebenzisa ingqondo.
5 Ubuntu beZen
Okanye yintoni enye, indawo entloko. Esi sicelo sinegama elithile liyafumaneka kuzo zombini i-Android kunye ne-iOS. Ixabiso lisimahla, kodwa lilinganiselwe. Njengoko sonke sisazi, ezoapps zigcina isiseko se Ukuthengwa kwangaphakathi nohlelo Oku kuthengwa kwahlulwe kwaba:
Ngenyanga: € 9,99
Ngonyaka: € 74,99
Ngonaphakade: € 399,99
Umyili wayo ubizwa ngokuba nguAndy Puddicombe kwaye ngaphandle kokuba sisayensi yezemidlalo kunye nemonki, ngoku ungusomashishini. Le app ye iconic yenza ukucamngca komoya opholileyo ngokuzonwabisa, kulula ukwetyisa iividiyo. Ukubonisana nokucamngca okufutshane nokulula kwisitayile esihle, le app ye-UX-centric ye-icon kufuneka uzame ukuba ufuna ukudibanisa ukubonwa komhla wakho.
Ngokophando olwenziwe liZiko leTekhnoloji yeLuntu, ukuzola yeyona app ishiya abasebenzisi bonwabe xa kuthelekiswa nolunye ukhuphelo oludumileyo. Ke, phefumla nzulu, umamele patter yemvula, kwaye ubone ngamehlo ukutshona kwelanga engqondweni yakho ngoncedo lokuzola.
Esi sicelo, njengangaphambili, simahla. Ngeli xesha, ixesha elincinci. Uvavanyo lweentsuku ezisi-7, ngomahluko, kuphela yi- € 35,99 eyahlula kuthengiso olunye. Akukho xesha lilinganiselweyo lokusetyenziswa okanye ubulungu.
Kugxilwe kwindalo yendalo, ukuzola yindawo engcwele evela kuphithizelo lobomi bomsebenzi. Ukuvota iApple ka-Apple yoNyaka ka-2017, iingoma ezolileyo zeendawo ezizolileyo kunye neendawo eziza kufumaneka ziya kukunceda uzibonakalise "kwindawo ekhuselekileyo" yengqondo. Ngomculo ojolise ekulaleni, ukucamngca, iiklasi eziphambili, kunye nokuzilolonga, le app yeyona ndlela ijolise kwindalo ngakumbi kwiHeadspace.
Nokuba ufuna ukubandakanya ukucamngca ekuphumleni kwakho, ukuhamba okanye ukutya, esi sicelo, esenzelwe ngokukodwa "abantu abaxakekileyo", ijolise ekuququzeleleni ixesha lokucamngca kwishedyuli yakho exakekileyo. Yenziwe "ngumlingisi ovunyiweyo." Isicelo sinemida yokusebenza yasimahla. Ukugqiba imisebenzi yayo unokhetho lweprimiyamu. Ngenyanga ye- € 5,49, i- € 39,99 ngonyaka okanye i- € 174,99 ngonaphakade.
Le mithambo imfutshane yokuvavanya imizuzu emithathu ukuya kwemihlanu, egubungela zonke iintlobo zokuzilolonga ukugxila ekuphefumlweni kwakho. Apho uyakususa ingqondo yakho iphela kwilizwe langaphandle elitsala uxinzelelo.
Nokuba ufuna ukuzama ingqondo ngokucamngca nge-101 okanye awukwazi ukulala kwaye ujonge ezinye iindlela zokuzilolonga Ukukunceda uphumle, ivili lokucamngca elinemibala likaBuddhify lenza kube lula ukukhetha kunye nokuzilolonga ukuze ulungele imeko. Injongo yesicelo kukuba ukwazi ukucamngca ngaphandle kokuyifuna kwakhona, ngokuzimeleyo kwi-APP ngokwayo.
I-4,99 € kuphela ufumana isicelo esipheleleyo. Hayi kwakhona.
I-Zen yobuqu, ngokomgaqo, uluntu lunokuthanda ngaphezulu. Isimahla, sisicelo kuphela esingadingi mali ukuba siyisebenzise ngokupheleleyo. Elula kwaye ikhethekileyo inceda ingqondo ukuba inqamle kwisikhuthazo esibi. Ukuba uqhele ukubona iglasi ingenanto, le app imnandi, nangona iphantsi ngandlela ithile, ngumoya womoya omtsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amaqhinga » Ezi zixhobo zintlanu ziya kukuhlangula kukudinwa kokuyila
Ringo Isilivere sitsho
Kubonakala kum ukuba oku kufana nokunceda umntu osela utywala ngokumnika ibhiya endaweni yamanzi. Ingxaki yethu ephambili kukuba phantse ukuxhomekeka kwezifo kwizixhobo eziphathwayo. Sihlala singamakhoboka omnxeba.
Phendula kwiRingo yesilivere
Uyilo olufikelelekayo kubantu abakhubazekileyo ngokubonakalayo